Pịa na egwu iji hụchalụ, mgbe ahụ, ndị ịchọrọ, pịa CART Icon iji gbakwunye egwu ahụ gaa zụọ gị.
(* Iche Iche dị na nkụnye ụda SoundCloud n'okpuru ebe a)
Ozugbo ịzụrụ zụrụ Dj ka ịchọrọ, ọ ga-adị njikere ngwa ngwa. Ihe ọhụrụ maka 2018!
Zụrụ ole na ole ma ọ bụ zụrụ ha ALL na ego nke na-abia na mmezi ego ego!
Ndekọ egwu - 106 Drops